Golaha Ammaanka oo ka shiraya arrimaha Soomaaliya – Hornafrik Media Network
By HornAfrik	 On Aug 21, 2019
Waxaa ka socda magaalada New York ee xarunta Qaramada Midoobay kulan ay leeyihiin Golaha Ammaanka, kaasoo looga hadlayo arrimaha Soomaaliya, iyadoo kulankaasna uu ka qeybgalayo safiirka Soomaaliya u fadhiya Qaramada Midoobay.
Kulankan ayaa loogaga hadlayaa xaaladihii ugu dambeeyay ee dalka Soomaaliya, iyadoo Golaha Ammaanka ay warbixin ka dhagaysan doonaan Wakiilka qaramada Midoobay ee Soomaaliya James Swan oo ku sugan New York.
Sidoo kale Safiirka Soomaaliya u fadhiya Qaramada Midoobey Danjire Abuukar Baalle ayaa jeedin doona khudbad uu uga hadlayo xaalada Soomaaliya, horumarada dowladda sameysay iyo arrimo kale.
Wakiilada matalaya xubnaha 15-ka dal ee Golaha ammaanka ayaa khudbado ay uga hadleen xaalada Soomaaliya ka jeediyay, sida Wakiilada Ingiriiska iyo Mareykanka.
Wakiil Mareykanka u hadlayay Shirka Golaha Ammaanka Qaramada Midoobey ka leeyihiin Arrimaha Somalia ee haatan socda ayaa ku baaqay in is ixtiraam laga muujiyo doorashada Jubbaland, si caddaalad ah, nabad iyo faragelin la’aan u dhacdo doorashada.
Mas’uuliyiin ka tirsan DF oo la shaaciyey inay guryahooda ku qarinayaan xubno Shabaab ah